Iindumiso zomntu oswelekileyo Discover ➡ Discover Online Online ➡️
Ngokwesiqhelo uninzi lwabathembekileyo luphakamisa umthandazo ngenxa yabangasekhoyo kwaye amaxesha amaninzi a Indumiso yomntu oswelekileyo xa uthandaza okanye uthandazela ukuphumla okungunaphakade, kweli nqaku siza kukufundisa iindumiso ukuze uzithathele ingqalelo.
1 Ezinye iindumiso zabafileyo onokuzifunda
2 Zithini iiNdumiso zabafileyo?
2.1 Indumiso 23 yabafileyo
2.2 Indumiso 34 yabafileyo
2.3 Indumiso yabaselula abaswelekileyo
3 Iindumiso kunye nemithandazo
Ezinye iindumiso zabafileyo onokuzifunda
Iindumiso ziyamangalisa ukucengceleza xa ubomi bethu buba nzima, kuba ziyasikhumbuza kwaye zisikhuthaze ngamandla afumanekayo kwindumiso nakunqulo lwabo, nokuba sithini na. Basikhomba kwintuthuzelo efumaneka kubukho bukaThixo, kwanaxa sisezintlungwini eziqatha naxa sikhumbula indlela amangalisa ngayo, athembeke kwaye alunge ngayo uThixo wethu.
Kweli thuba siza kukufundisa iindumiso ezimbini ezintle kakhulu ukuze ukhethe njenge Indumiso yomntu oswelekileyo kwaye uyisebenzise njengoko kunokuba njalo. Ukuyifunda kulula kakhulu kwaye kuya kukuthatha nje imizuzu embalwa ukuyenza ngokholo oluninzi, kwaye ungayenza nangaliphi na ixesha losuku.
Ngamanye amaxesha kunzima ukufumana amazwi athuthuzelayo xa umntu othile eve ubunzima ukufa kwilungu losapho okanye umhlobo osenyongweni, kodwa iindumiso zebhayibhile ziyanceda ekuboneleleni ngentuthuzelo ayifunayo loo mntu. Siza kwenza kamva iindumiso ezisetyenzisiweyo ukuthuthuzela ukuswelekelwa ngumntu omthandayo.
Zithini iiNdumiso zabafileyo?
IiNdumiso yimibongo efundelwa ukudumisa uThixo wethu xa zisetyenziswa kwaye uninzi lwazo luneemfundiso ezinkulu ebomini bethu ezimele isixhobo esihle sokwakha indlela yethu. A Indumiso yomntu oswelekileyo iqulethe amazwi entuthuzelo novuyo lokukunceda ukwazi ukumelana nentlungu yokuphulukana nalo mntu umthandayo.
Sivuma ngokupheleleyo ukuba iintlungu zelahleko azichazeki, ukungabinanto abakushiyayo kubomi bethu kubuhlungu kakhulu kwaye kuya kufuneka sifunde ukuhlala nayo. Yiyo loo nto la maxesha kufuneka oyiswe inyathelo ngenyathelo kwaye enye yeendlela zokwenza oko ngoncedo lweendumiso ukuzicengceleza ngeli xesha.
Siza kukufundisa apha ngezantsi kwezona ndumiso zimbini zisetyenzisiweyo kuthi ndlela-ntle kofileyo, equlathe amagama enkuthazo kunye nokufundisa okuvela kuThixo.
Indumiso 23 yabafileyo
Le ndumiso yivesi entle apho ichaza ukuba uThixo ubanceda kwaye ubakhathalele abo bamnika ubomi bakhe. Xa sidlula kumaxesha okubandezeleka kunye nosizi ngokuswelekelwa ngumntu omthandayo, iNdumiso 23 ibonisa ukuba okoko nje usondele kuThixo, uyakusithathela kuye kwaye akasokuze akushiye, INkosi ingumalusi wethu kwaye siyakusilela Akukho nto kuba uyakusizalisa ngeentsikelelo ezingapheliyo njengoko esijongile.
UThixo ungumalusi onakekela izimvu zakhe ngothando infinito, uyakuhlala ekukhokela ebomini bakho bonke ukuze uphumelele kwaye xa ixesha lokufa kwakho lifikile, ungabufumana ubukumkani bamazulu, uya kukunika intuthuzelo noxolo xa ujongene nokufa kothandekayo. inye.
Uyasikhusela, usikhathalele kwaye uyasikhusela kwiimeko ezinzima, usikhokele kwindlela yakhe ukuze ekupheleni kobomi bakho ufikelele kwisandla sakhe sasekunene. Xa uziva ukuba umhlaba wakho uyadilika ushiyekelwe ngumntu osenyongweni xa besifa, uThixo ukhona ukukukhathalela nokukuthuthuzela.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni INdumiso 23 ngenisa ikhonkco esikushiyele lona kwaye uyazi ukuba lifundwa njani.
Indumiso 34 yabafileyo
Iindumiso 34 ibalisa ukuba kufuneka sihlale siyifuna iNkosi, simnike imbeko, kwaye siphantsi kwemiyalelo yakhe, kuba ekupheleni kobomi bethu uya kuba nozuko olungunaphakade olulungiselelwe kunye naye, ikwabonisa ukuba abo bamfunayo nabamamkelayo njengabo umsindisi akasoze ashiywe ngenxa yakhe.
Kulabo bazalisekisa imiyalelo yakhe, imiphefumlo yabo iya kukhuselwa kwaye ukuba uhlala umfuna akasokuze akushiye kwaye uya kuhlala ekumamela kwaye ekukhulule kulo lonke uloyiko kunye neentlungu zakho. Ukuba uyazibuza ukuba kutheni uThixo emthathile lowo umthandayo ecaleni kwethu, kuya kufuneka uqonde ukuba wakwenza oko kungenxa yesizathu kwaye xa esenza isigqibo kuhlala kulunge kuthi.
Ngokwamkela uThixo asinakuze sishiywe, abo bakhalela uthando lwakhe baya kukhululwa kwintlungu yabo, abo bathembela kuyilo lwakhe baya konwaba ngokupheleleyo, iingelosi zakhe ziyakukhusela kuba uya kumzukisa, umbiza ngegama Ndiza kuhlala ndikuphendula kwaye ndikukhulule kuzo zonke iintlungu namaxhala akho. INkosi iya kuyikhulula imiphefumlo yabakhonzi bayo kwaye abasayi kuba nasigwebo.
Ngenisa eli khonkco lilandelayo ukuze wazi ukuba yintoni INdumiso 34 kwaye ungasoloko uziphatha ngazo ukuze uzisebenzise xa ufuna kakhulu.
Indumiso yabaselula abaswelekileyo
Abanye abantu bakhangela iindumiso ezijolise ngqo ekufeni komntwana kwaye zinika uxolo kumphefumlo wakhe. Nangona kunjalo, emva kokwenza uphando ngeendumiso kwaye waxoxa ngesihloko kunye nabanye abaphengululi beBhayibhile, akukho ndumiso inikezelwe ngokukodwa kulutsha xa lusifa.
Kule meko kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe enye indumiso esele ikhankanyiwe ngasentla kwaye ukuba umfundisi anike intshumayelo yakhe yokugqibezela ubunzima.
Iindumiso kunye nemithandazo
IiNdumiso, njengoko besesitshilo ngaphambili, ziyimithandazo enamandla kunye neendumiso eziphakamileyo kuThixo wethu uSomandla, kodwa ukujongana nokufa kothandekayo kuyacetyiswa kungekuphela nje ukusebenzisa iiNdumiso ukuzicengceleza emthandazweni, kodwa Okomzuzwana wedwa noThixo ukuze ubuze ukuba ithini na intliziyo yakho ngalo mzuzu malunga nalo mntu umthandayo esele imkile ukuya ngasekunene kweNkosi yethu.
Iindumiso zokuthandaza kwabafi zibaluleke kakhulu kumsitho wokuvalelisa umntu esimthandayo, kwaye wenziwa ngeentsuku zokuzila emva kokungcwatywa kwabo. Yimithandazo enamandla kakhulu esetyenziselwa ukuthandazela ukuphumla okungunaphakade ukongeza ekwenzeni ukuba siqonde ukuba ukumka ezulwini komntu esimthandayo akunto yimbi ngaphandle kotshintsho, luhambo oluya ebomini kunye nozuko kunye neNkosi yethu uYesu Krestu.